GAROOWE- Magaalada Garowe ayaa waxaa ka socda qaban qaabada furitaanka Garoonka diyaardaha cusub ee magaalo madaxda Puntland kasoo dhisme ku socdey muddo Sadex Sano ah.
Waxaa kaloo dhiman oo weli gacanta lagu hayaa dhismaha Terminal-ka iyo qaar ka tirsan jidadka muhiim u ah isticmaalka Garoonkaan.
Dhinaca kale Madaxweynaha Puntland ayaa daneynaya in furitaanka Garoonkaan ku soo beego munaasabada 8 January oo ah markii la doortey. Munaasabadaan ayaa noqon karta tii ugu dambeysay ee Mudane Cabdiweli Maxamad Cali Gaas madaama doorashadii Madaxtinimada ee Puntland dhaceyso dhamaadka sanadkaan.
Garoonka diyaardaha Garoowe ayaa waxa lacagtii ugu horeysay ee lagu bilaabey ku deeqdey dalka Kuwait iyadoo ka gaabisay iney bixiso wajigii labaad ee mashruucaan iyadoo sababtey in dhameystirkiisa lagala kulmo dhibaato badan.
Garoonka cusub ee diyaardaha Garoowe ayaa dadka u kuurgala arimaha duulimaadyada waxay aaminsan yihiin in uu noqon doono midka ugu mashquulka badan Puntland madaama uu ku yaala bartamaha degaanada uu ka kooban yahay maamulkaan iyo kuwo dariska la ah sida Somaliland iyo Ethiopia.
Wararkii ugu dambeeyay Ciidamo la wareegay Garoonka diyaaradaha Garoowe
Puntland 03.11.2018. 16:15
Gadoodkan ayaa kusoo beegmay xilli uu Garoowe ka degay Ergayga UN-ka oo...
Puntland 13.11.2016. 17:57